यौन आनन्द यसरी प्राप्तगर्न सकिन्छ, यि हुन तरिका ?
Posted: 2018-06-30 07:44:42
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- जोडीहरु आपसमा भावनात्मक रुपमा गाँसिएर शारिरीक स्पर्शको माध्यमबाट चरम सुखमा पुग्नुनै सम्भोग हो जसमा दुबै पक्षले पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछन । तर सम्भोगमा जोडी मध्ये एकले मात्र चरम सुख प्राप्त गर्नु र अर्को प्यासमा तड्पिनु सम ं भोगको भावना बिपरित हुन जान्छ । तसर्थ कसरी जोडीले चरम सुख प्राप्त गर्न सक्छन भन्ने बारे हामी चार्चा गर्छौ ।...
इन्टु मिन्टु लण्डनमा को रोमान्टिक टिजर सार्वजनिक
Posted: 2018-06-29 14:04:53
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - फिल्म इन्टु मिन्टु लण्डनमा को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको टिजर सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक टिजर रोमान्टिक छ। जहाँ फिल्मका मूख्य कलाकार साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र धिरज मगरलाई फिचर गरिएको छ । ...
आँचल शर्मा र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भुमिका रहेको फिल्म ब्ल्याकको ट्रेलर रिलिज
Posted: 2018-06-28 14:36:39
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - आँचल शर्मा र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भुमिका रहेको फिल्म ब्ल्याकको ट्रेलर रिलिज भएको छ । बुधाबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । प्रेम, रोमान्स, विछोड र एक्सन जस्ता सम्पूर्ण पक्षलाई समेटिएको ट्रेलर आकाश श्रेष्ठको डाइलगमाय छ । ...
ल हेर्नुस के–के देखाईन् डेमी रोजले ? (फोटोफिचर)
Posted: 2018-06-27 08:38:30
काठमाडौं । लन्डनकी हट र सेक्सी मोडल डेमी रोजले हालै फोटोसुट गरेकी छन् । उनले त्यसका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन् । यी तस्बिरले इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाएका छन् । डेमी सेता र कालो बिकिनीमा देखा परेकी छन् । फोटो सुटमा लगाएका कपडा उनी पार्टीहरूमा पनि लगाउँछिन् । ...
प्रेमिकाले कति विश्वास गर्छिन ? कतै धोका त दिइरहेकी छैन ? कसरी थाहा पाउने ?
Posted: 2018-06-27 06:01:01
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- भनिन्छ माया प्रेम बिना संसार चल्दैन । प्रेम सम्बन्धमा भएका सबैले आफ्नो प्रेमकथा पनि मुनामदन वा रोमियो जुलियटको अमर होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, पनि धेरैको प्रेम सम्बन्ध विभिन्न कारणले बीचमै अनायसै टुट्ने गरेको छ । खासमा भन्ने हो भने एकअर्का बीच विश्वासमा कमी भएमा एक राम्रो प्रेम सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्छ । ...